PPC Mashandisirwo Martech Zone
PPC Automation: Keywords Kuenda Musango
Chipiri, Kurume 15, 2011 Muvhuro, October 12, 2015 Chris Bross
Mwedzi miviri yapfuura, takanzwa nezvekambani yaive kubhidha mari inodarika miriyoni imwe Keywords. Kushambadzira kwekambani vanhu vaifunga kuti izvi zvaitonhorera. Chaizvoizvo?
Kana munhu aine hombe yakakwana yePPC Budget, chingave chii chakashata nekubhadharisa pamashoko mazhinji akadaro? Iko kusimbiswa paKupamhamha, "Fat Musoro" machisi, hapana Negative Keywords kuisirwa, uye kusasarudzika kushandiswa kweotomatiki / Dynamic Keyword Kuisa kunotungamira pakuratidzwa kwekusaita / kusashata kushambadzira.
Gore rapfuura, tichitsvaga online pekuchengeta mwana, mumwe wevanachipangamazano vePPC akaona kushambadzira kuchinzi "Vanochengeta vana!"
Mune ruzivo rwedu, kushambadzira kwakadaro kunoitwa otomatiki nemidziyo inogadzira Mazwi Akakosha zvinoenderana nekutsvaga chaiko uye zvakajairika Zvinyorwa zveMavara. Nekudaro, iwe unopedzisira uine Ad Mapoka ane huwandu hunosekesa hweMazwi (zviuru nezviuru, kazhinji zvisina hukama kune mumwe nemumwe) uye PPC Campaigns izvo zviri pedyo nekusagone kunyatso gadzirisa kana kudzora.
Heano mimwe mimwe mienzaniso yazvino:
Kutsvaga mukomana zvakakonzera kupihwa "Mukomana Wechipo Chekutengesa!" apo kambani yacho yainyatsotengesa vakomana mbatya.
Kambani inotengesa pombi dzemvura yakaratidza kutsvaga kwekutenga zvinhu.
Imwe yemashopu makuru epamhepo online yakaratidza PET. Zvakaipisisa, tarisa iyo yekuratidzira URL. Chii chinonzi patio chine chekuita nemhuka, kana kunyangwe mabhuku?
Iyi mienzaniso inowanzo kuve nyore kuwana kana iwe ukaita mashoma ekutsvaga pane zvakajairika Mazwi Akakosha. Zvakare zvakare, kamwechete kwechinguva, iwe unowana gem pane imwe yakatsvaga yekutsvaga iwe paunenge usingaitarisire iyo.
Nenzira dzose, shandisa PPC kushandisa michina paunenge uchida kusevha pane vanhu, asi usazviita uchikanganisa kushanda. Kana yako PPC Campaigns isina kunyatso kukwidziridzwa, iwe unomuka ne PPC Keywords Kuenda Musango.
Nyaya dzawaona ndedzechokwadi; chete mazita emakambani akadzimwa kudzivirira vasingazive.
Tags: ad kushandisa michinakushandisa michinamazwi akadzamaakabhadhara kushambadzirayakabhadharwa kutsvagaakabhadhara yekutsvaga otomatikippcppc kushandisa michina
Kudzorera Yakashata WordPress Siti